ညီလင်းသစ်: ချစ်သောဧရာဝတီ ...
နီးနီးကပ်ကပ်၊ ရင်းရင်းနှီးနှီး နောက်ဆုံးတွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ဧရာဝတီပါ...၊
ပထမ မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ နှလုံးသားဗဟို တည့်တည့်က ဧရာဝတီ...၊
ဧရာဝတီပေါ်မှာမွေး၊ ဧရာဝတီပေါ်မှာကြီး၊ ဧရာဝတီပေါ်မှာပဲ ရှင်သန် ကြီးရင့်ခဲ့တယ် ...၊
ဧရာဝတီရယ် စီးဆင်းပါ ... ...၊
ပျော်ရွှင် ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ ပေါင်းဆုံခွင့်ပေးပါ... ...၊
အို.. ချစ်သော ဧရာဝတီ....၊
ဧရာဝတီကို ညှိုးရော်၊ ခြောက်ခန်းစေမယ့် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်၊ အားလုံးရဲ့ ဧရာဝတီ အသက်ဓာတ် ပြင်းပြစွာ ဆက်လက် ရှင်သန်စီးဆင်း ပါစေ...။ ။
၂၃ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
Posted by ညီလင်းသစ် au 23.9.11
ကိုညီနဲ့ ထပ်တူ ဧရာဝတီကို ညှိုးရော်၊ ခြောက်ခန်းစေမယ့် မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်။
စီးဆင်းပါစေ ဧရာဝတီရေ... ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ဧရာဝတီစီးဆင်းစေဖို့ ကူညီမဲ့လက်များ တတပ်တအားပါပဲလား..
ပထမဆုံး ပုံလေး သဘောအကျဆုံးပဲ။ အခု ရန်ကုန်မှာ လုပ်နေတဲ့ ဧရာဝတီ ဓါတ်ပုံပြပွဲထဲ အကို့ပုံတွေပါ ဝင်ပြရင်ကောင်းမယ်။ ကျွန်တော်က စစ်တောင်းမြစ်ကမ်းပေါ်က မြို့သားပေမယ့် ပြည်မှာ ကျောင်းတက်တုန်း ဧရာဝတီနဲ့လည်း သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ကျောင်းပိတ်ရက် မနက်ခင်းတိုင်း မြစ်ကမ်းနဲ့ နီးတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ မနက်စာစား၊ သောကြာ၊ စနေ ညနေခင်းတွေဆို မြစ်ဆိပ်က အကြော်ဆိုင်မှာထိုင် ပြောရင် လွမ်းစရာတွေချည်းပဲ။ ကန့်ကွက်တယ်ဗျာ။ ဒီညတော့ ကျွန်တော်လည်း ရေးဖြစ်အောင် ရေးလိုက်ရမယ်။ မနေနိုင်တော့ဘူး။
ဧရာဝတီကိုကြည့်ရတာ ကြည်ကြည်နူးနူးရှိလိုက်တာ....။ ငါတို့ရဲ့မိခင် ထာဝရဆက်လက်ရှင်သန်ပါစေ....။
ပုံထဲမှာ ဧရာဝတီရဲ့ အားမာန်တွေကို တကယ်မြင်နေရတယ်
ဧရာဝတီကို ချစ်သူတွေကတော့ ဒီစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ကြပေမဲ့ ကိုယ့်အကျိုးကြည့်သူတွေကတော့ ဆက်လုပ်ကြမှာဘဲထင်ပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ ကြည့်လို့မ၀တဲ့ ပန်းချီကားတချပ်ပါ
လေနုအေးလေးတွေရဲ့ ရနံ့ကိုတောင် ရှူရှိုက်မိလိုက်ရသလိုပဲ...။
သဘာဝရဲ့ စုတ်ချက်နဲ့ ရေးဆွဲခြယ်မှုန်းထားတဲ့
ဓာတ်ပုံတွေ လှလိုက်တာ ဒကာတော် ညီလင်းသစ်ရေ။ တကယ်ပဲ။ ဘုန်းဘုန်းလည်း ဒကာတော် ကိုညီလင်းသစ်နည်းတူ လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါကြောင်း...
'မြစ်ဧရာ' ထာဝရအေးချမ်းစွာစဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းနိုင်ခွင့်ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းတောက် ရဲ့ ကန့်ကွက်သံ က တိုးနေ သလိုဘဲ ကိုညီလင်းသစ်
ကျေးဇူး ကိုညီ ရေ အားလုံး အားလုံး နဲ့ အတူ ကန့်ကွက် မယ် လုံးဝ လုံးဝ
အစ်ကိုရာ....အရင်ကဆို ဒီလို ဓာတ်ပုံတွေမြင်ရရင် ဝမ်းသာ
ကြည်နူးမိမှာ အမှန်ပါ။ခုတော့ ရင်ထဲလွမ်းမိတယ်....။
ကျွန်တော်တို့နောင် ၈နှစ်ကြာရင် ဒီလိုဧရာဝတီကို မြင်ရပါ
I grew up along Ayarwaddy though i was born atalittle town on Chindwin river bank.We all have precious memory of Ayarwaddy.
"WE PROTEST DAMN DAM PROJECT"
"MEN MAY COME AND MEN MAY GO BUT YOU GO ON FOREVER MOTHER AYARWADDY"
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဧရာဝတီ ရှင်သန်နေရမည်
လှပ နေရမည် ထာဝရ မြန်မာပြည် ရှိသ၍ သူရှိနေရမည်။
မြဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို အကြွင်းမရှိ ကန့်ကွက်ပါတယ်။
စီးဆင်းပါအုံး ဧရာဝတီရယ် ။
မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်းကို လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်၊
ဟုတ်တယ်အစ်ကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို ကန့် ကွက်ပါတယ်...
ကျမလည်း ဧရာဝတီ ရပ်သွားမှာမကြိုက်ပါဘူး။
ဓာတ်ပုံတွေအရမ်းလှတယ်။ တကယ်ကို ပြန်ချင်လာတယ်။
Stop Immediately Irrawaddy Dam Project Construction.
ဓါတ်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ရင်နင့်ရတယ်။ ထပ်တူပါပဲ..။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်.။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကြီးကိုလုံးဝ လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်
မြစ်ဆုံရောကာတာစီမံကိန်းအား လုံးဝဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ပါတယ်..
ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံး သိပ်ကြိုက်တာပဲ ကိုညီလင်းရေ ...
ဓာတ်ပုံတွေက စကားပြောနေသလိုပဲနော် ...
ပုံတွေကြည့်ရင်း အသံတွေကြားနေရတယ် ...
ရေလှိုင်းသံတွေရော ... နားထဲမှာ ကြားယောင်လာတယ် ... ။
ကျမကတော့ ယုံကြည်နေပါတယ်၊ အားလုံးချစ်သော ဧရာဝတီ အမြဲစီးဆင်းနိုင်မှာပါ ... ။
ကိုညီ ရိုက်ချက် လန်ထွက်တယ်...မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အကြွင်းမဲ့ ကန့် ကွက်သည်..ဧရာဝတီ အဓွန့် ရှည် တည်တံ့ပါစေ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေ လို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်
စိတ်တူကိုယ်တူပါပဲ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။
Kyaw Htwe said...
လွန်ခဲ့တဲ့(၂)နှစ်က ကိုညီလင်းသစ်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီ
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကနှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်
ထူးအိမ်သင် သီဆိုခဲ့တဲ့ ရာဖ၀င်များရဲ့သတိုသမီး ..
ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီးခေါင်းဆောင်ကောင်း
ပီသပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့လက်ထဲမှာ သူ့ရဲ့အသွေးအသားတွေကို အလိုမတူပဲ
တွေကို ဒါဟာ ဧရာဝတီမြစ်ကွ ..လို့ ပြောနိုင်ဖို့
ဆိုတာ မသေချာနိုင်တော့ပါဘူး ကျွန်တော်တို့
ကံအလွန်ကောင်းရင်တော့ ဒါဟာ ..ဧရာဝတီချောင်း
သို့မဟုတ် မြောင်း ..လို့တော့ဖြင့် .....
ဘာလို့များ သူ့ရင်ဘတ်ကိုနွမ်းခြောက်အောင်လုပ်ချင်နေကြပါလိမ့်.။ဆည်းဆာရောင်တွေလင်းလက်မှုန်ရီစွာဖျာကျနေတဲ့ သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကညနေတွေကိုဘိုးဘွားဘီဘင်တွေခေါင်းချခဲ့ရာ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ရွာလေးရဲ့ ကမ်းနဖူးကနေငေးကြည့်ခွင့်တွေရချင်ပါသေးတယ်..။
ချစ်သော ဧရာဝတီ ထာဝရစီးဆင်းပါစေရှင်။
ဒုတိယပုံကို ပိုကြိုက်တယ်.. ငယ်ငယ်က ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်ရှိနေတဲ့ အမေတို့ရွာကို တနှစ်တခါရောက်ခဲ့ဖူးတာ သတိရမိတယ် ဗမာပြည်အကြောင်း ကြားရတဲ့သတင်းတွေဟာ ဘယ်တော့များမှ ကောင်းမှာပါလိမ့် ကတောက် !
ကိုညီရေ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ဧရာဝတီရဲ့ ရင်သွေးတွေ
မိခင် ဧရာဝတီအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသကြတယ်လို့
သာယာရှု့မောဖွယ်ကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ရင်း နာကျင်စွာ ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်အကိုရေ ..